ဝီးစကက်ရှဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီးရှိ ဘုရားဖူး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း*
ဝီးရှိ ဘုရားဖူး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း သည် ဘဲဥပုံစံ ရိုကိုကို ဗိသုကာပုံစံ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၇၄၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းတွင် ညီအစ်ကို နှစ်ဦး ဖြစ်သော ဂျေ.ဘီ. ဇင်မာမန်း နှင့် ဒိုမီနီးကပ်စ် ဇင်မာမန်း တို့မှ တည်ဆောက်ခဲ့ကာ ဒိုမီနီးကပ်စ်သည် ၎င်း၏ သက်တမ်း နောက်ဆုံး ၁၁ နှစ်ကို ထိုအဆောက်အဦး အနီးအနားတွင် နေထိုင်ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏ ခြေရင်းတွင် ရှိပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာဗေးရီးယားပြည်နယ် ဝေးလ်ဟိမ်း-ရွှန်းဂေါခရိုင် စတိန်းဂါ့ဒင် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် အတွင်း တည်ရှိသည်။
ပါးစပ်ပြော ရာဇဝင်အရ ၁၇၃၈ တွင် ယိုယွင်းနေပြီဖြစ်သော ကယ်တင်သူ ခရစ်တော်အား ကြိမ်ရိုက်နေပုံ သစ်သားရုပ်တွင် မျက်ရည်များ တွေ့ရသည် ဟု ဆိုသည်။ ထိုထူးဆန်းသော အဖြစ်အပျက်အတွက် ဘုရားဖူးများသည် ရုပ်တုကို ကြည့်ရန် အပြေးအလွှား လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၇၄၀ တွင် ထိုရုပ်တုအား ထားရှိရန်အတွက် ချက်ပယ် ဘုရားကျောင်း အသေးစားလေး တစ်ခုအား တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း မကြာမီအချိန်တွင်ပင် လာရောက်သော ဘုရားဖူးများ၏ အရေအတွက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဆောက်အဦးသည် အလွန်သေးငယ်ကြောင်း သတိပြုမိလာကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် စတိန်းဂါ့ဒင် အဲဘီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သီးသန့်ဘုရားခန်း တစ်ခု ဆောက်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စင်ပေါ်ရှိ ယေရှုခရစ်၏ ရုပ်တုရှေ့တွင် ဘုရားရှိခိုးကြသော လူအများမှာ ထူးဆန်းစွာပင် သူတို့၏ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းသွားကြသည်ဟု ဆိုကြသဖြင့် ဘုရားကျောင်းသို့ ဘုရားဖူး လာရောက်သူ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။
ဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ၁၇၄၅ မှ ၁၇၅၄ အထိ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အတွင်းပိုင်းအား ဝက်ဆိုဘရန်းနာ စကူးလ် ၏ ပုံစံ အင်္ဂတေပန်းချီများ နှင့် သရွတ်နုပန်းချီများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ "ဘုရားကျောင်း တစ်ခုလုံးတွင် ပြုလုပ်ထားသမျှသည် သဘာဝလွန်များကို မြင်သာအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ပန်းပုရုပ်များနှင့် နံရံဆေးရေးပန်းချီများ ပေါင်းစပ်ပြီး အနန္တတန်ခိုးတော်တို့အား မြင်သာသည့် ပုံစံဖြင့် ပြသထားသည်" ဟု ဆိုသည်။ 
လူအများကြား ရေပန်းစားနေသော ယုံကြည်မှုမှာ ဘာဗေးရီးယန်း အစိုးရမှ ဘာဗေးရီးယားအား ဘာသာတရားမှ ကင်းလွတ်အောင် ပြုလုပ်စဉ်တွင် ရိုကိုကို ၏ အပြောင်မြောက်ဆုံး လက်ရာအား ၁၉ ရာစု အစပိုင်းတွင် ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် ဖြိုဖျက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပြီး ဒေသခံ လယ်သမားတို့၏ ကန့်ကွက်မှုကြောင့်သာ ထိုအစီအစဉ် ပျက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ရရှိနိုင်သော အထောက်အထားများအရ သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော်၏ ကော်မရှင်မှ စတိန်းဂါဒင်၏ ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းကြီးမှ စီးပွားရေး အကြောင်းအရ ကန့်ကွက်သည့်တိုင် ဝီးအား ဘုရားဖူးဒေသ အဖြစ် ဆက်လက်ထားရှိရန် အကြံပေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ 
"ဝီးစကက်ရှဲ" အား ၁၉၈၃တွင် ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁ အတွင်း အကြီးအကျယ် ပြန်လည်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘုရားကျောင်းအား ဆောင်းရာသီတွင် အပြင်ဘက်မှ မြင်ရပုံ
↑ White၊ James F. (2003)၊ Roman Catholic Worship: Trent to Today၊ Collegeville, Minn.: Liturgical Press၊ p. 50၊ ISBN 0-8146-6194-7
↑ Stutzer၊ Dietmar; Fink၊ Alois (1982)၊ Die irdische und die himmlische Wies၊ Rosenheim: Rosenheimer Verlag၊ pp. 99–100၊ ISBN 3-475-52355-8
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီးစကက်ရှဲ&oldid=676901" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။